Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo la doortay | Somaliland Mirror
Home WARARKA Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo la doortay
Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo la doortay
adminJan 08, 2019WARARKA0
Garoowe (Somalilandmirror.com ) – Waxaa soo dhamaaday tirinta codadka wareega saddexaad ee doorashada madaxweyne ku xigeenka Puntland oo ay ku tartameen labada musharax ee kala ah Axmed Cilmi Cismaan Karaash iyo Cabdi Ibraahim Warsame (Qowdhan).
66 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Puntland ayaa codkooda dhiibanayay, waxaana xilka madaxweyne ku xigeenka Puntland ku guuleystay Axmed Cilmi Cismaan Karaash.
Labada musharax ayaa codadka u kala helay sidan, Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo helay 47 cod, iyo Cabdi Ibraahim Warsame (Qowdhan) oo helay 19 cod.
Axmed Karaash ayaa kasoo jeeda beelaha Khaatumo, waxaana uu ka mid ahaa aas-aasayaashii maamulka Khaatumo.
Previous Post"Somaliland waxay Qaramada Midoobay kula talinaysaa inay ergay u khaas ah u soo magacaaban" Wasiirka arrimaha Dibada Somaliland Next PostMadaxa Bangiga Adduunka Jim Yong Kim ayaa ku dhawaaqay in uu xilkaasi iska casilayo.